आतंकले जन्माएका प्रश्नहरू – The Global
« Key handler of 26/11 Mumbai terror attack is arrested
पर्खाल त निहुं मात्र थियो »
आतंकले जन्माएका प्रश्नहरू
By Shashi Poudel | June 26, 2012 - 6:05 pm | June 26, 2012 Around the World
यो लेख मैले डिसम्बरको पहिलो हप्ता २००८ सालमा लेखेको हूँ । यो आतंकको योजनाकार मध्यको एकजना ब्यक्ति अहिले आएर बल्ल पक्राउ परेकाले सान्दर्भिक हुने लागेर यहाँ पुनः प्रकाशित गरेको छु ।
छिमेकी मुलुक भारतको वित्तीय शहर मुम्बईमा गत साता भिषण आतंककारी हमला भएको छ । हमलामा झन्डै दुइसय व्यक्तिहरुको हत्या भएको र ठूलो भौतिक क्षतिसमेत भएको छ । गत हप्ता बुधबार म स“धैजस्तो सा“झको दश बजे टेलिभिजन अगाडि बस“े । समाचार आउदै थियो । ‘मुम्बइको मटुमुा हमला ।’ टेिलभिजनको च्यानल फे र“े । अलजजिराले पनि मम्ुबइर्को समाचार दिइरहेको थियो । अलजजिराले एक सयभन्दा बढी व्यक्तिहरु हताहत भएको समाचार दियो । यो पंक्ति लेख्दासम्म झण्डै दइु सयको हत्या भएको र सयांै घाइते भएको समाचार आएको छ ।
सा“चो हो कि मुम्बईको मुटुमा आतंकारीहरुले हमला गरे । यो पनि सा“चो हो कि ताज होटेलको नोक्सान भयो । अनि यो पनि सा“चो हो कि ठूलो संख्यामा धनको मात्र हैन जनको पनि क्षति भयो । तर बिबिसीको पहिलो समाचारले मानव क्षतिलाई पटक्कै पहत्व दिएको पाइएन । उसले त खाली बेलायतले बनाएको ताज होटेलको नोक्सानी मात्रै देख्यो । यति पनि उनीहरुले सोच्न सकेनन् कि भौतिक सम्पत्ति पुन पुर्ति गर्न सकिने चिज हुन्, तर व्यक्ति र व्यक्तिले बनेको समुह र त्यसको क्षति पूर्ति गर्न सकिदैन । घोत्लिदै जा“दा आखिर आतंकको शुरु कहा“बाट भयो र मानिसले आतंक किन गर्छन् ? दिमागभरी प्रश्न उठे । सोचाई अगाडि बढदै गयो । थुपै्र प्रश्न आउन थाले । जस्तै के यो आतंक मुसलमान र क्रिश्चियनबीचको लडाई हो त ? यदि त्यसो हो भने सा“ढेको जुधाई बाछाका े मिचाई किन गर्न े ? भारतमै भएकाले अर्काे प्रश्न उठ्या,े हिन्द ु र मुसलमान बीचको लडाइ हो त ? यसको पनि चित्तबुझ्दो उत्तर भेट्न सकिन“ । यद्यपि, हिन्दु र मुसलमान एक अर्कामा जानी दुश्मन भन्ठान्छन् । तेस्रो प्रश्न उठ्यो, वैभव आधुनिक रमझम र पौराणिक मान्यता, कला र संस्कृति बीचको युद्ध हो ? यदि त्यसो हो भने मुसलमान समुदायभित्र पनि फिल्मी दुनिया“ छ । आधुनिकता छ र वैभव छ । आखिर यो केको रिसइवी हो । मुम्बईका निरिह प्राणीले के बिराएका थिए र उनीहरुमाथि आक्रमण भयो ? उत्तर सपाट थिया,े उनीहरुमाथि लक्ष्यित गरेर आक्रमण गरिएको भए पनि यो चेतावनी अरु कसैलाई दिएको हो । किनभने इतिहासले यस्तै भन्छ । अहिलेको इजरायल, प्यालेष्टाइन, सुरिया, असुरिया क्षेत्रमा बेला–बेलामा ईसाई र मसु लमान बीच झडपहरु भइरहन्थ े । झडपको बीचमा यहुदीहरु पनि आउने गर्थ े र यहुदीहरुले त्यसताका ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे गर्थे । जस्तो कि झडपमा इसाई बलियो देखे ईसाइको पक्ष लिने र मुसलमान बलियो देखे मुसलमानको पक्ष लिने । तर एघारांै शताब्दीसम्म त्यति ठूला यद्धु भएको पाँइदैन । जब एघारांै शताब्दीको अन्ततिर रोमका इसाइहरु अथार्त ईसाइ युद्धु नायकहरु संसार चहार्दै र ब्रम्हलुट गर्दै हिडन् थाले । ससार चहार्ने क्रममा उनीहरु अहिलेको इजरायल र प्यालेष्टाइन पुगे । तब उनीहरुले थाहा पाए कि त्यो एउटा खोचंोमा परेको समुद्रको तट हरतरहले उपयुक्तु उनिहरुका लागि उपयुक्त रहेछ । अन्य क्षेत्रमा आक्रमण गनर्, आक्रमण गरेपछि लुक्न र बिश्वको विभिन्न क्षेत्रमा आवतजावत गर्न सजिलो हुने ठाने । यसरी प्यालेष्टाइन, अर्थात अहिलेको इजरायललाई युद्ध क्षेत्र बनाउन आºनो कब्जामा लिए । त्यति मात्र होइन उनीहरुले त्यस क्षेत्रमा बसोेकबास गर्ने मुसलमानहरु कलाका असाध्य धनी ठाने । मुसलमानहरुको यो पक्षलाई ती युद्ध नायकहरुले इष्र्याको रुपमा हेर्न थाले । यसरी इस्लामिक धर्मालम्बी र पश्चिमेली इसाइ अथार्त रोमन सभ्यताबीच द्वन्द्व शुरु भयो । यसबीच धर्मको नाममा थुपै्र युद्धहरु भए । सत्रांै शताब्दीमा, किटेरै भन्दा १६१८ देखि १६४८ सम्म तिसबर्षे युद्ध भयो । यद्यपि यो धार्मिक युद्ध रोमन क्याथलिक र प्रोटेस्टेन्टबीच भएको थियो । ३० बर्षसम्म उक्त यद्धुको प्रकार पनि मानिसहरुको समुहमा जाने जथाभावी मान्छे मार्ने । दोषी वा निर्दोष कुनै भेद नछुट्याउने र यसलाइ धर्मको रक्षाको निमित्त भन्ने गरियो । मुसलमानहरुले थुपै्र कुराहरु इसाइहरुको उक्त युद्धबाट पनि लिए र आत्मघाती बम पड्काउन थाले । धर्मको रक्षाका नाममा आºनो आहुती दिन थाले ।
राजनीतिक विद्रोह र क्रान्तिबाट ससारमा थुपै्र परिवतर्न हरु भए । तर धार्मिक बिद्रोहको रा“को कतै पनि निभेन । लेवनान र प्यालेष्टाइनमा उठेको धार्मिक विद्रोहको राँकोले इजरायलबाट मुसलमानको बीउ पनि उडायो । अन्त त बीसांै शताब्दीको मध्यतिर ‘इसरायल’ नामक एउटा छुट्टै राज्यको घोषणा भयो । यो घोषणा भैसकेपछि
झन् पश्चिमेली सरकारले द्वन्द्वको आगोमा घिउ थप्दै आउन थाले । भनाइको मतलब दुवैतर्फ हातहतियार उपलब्ध गराउन थाले । अरबीयन मुसलमानस“ग पैसा लिएर र इसराली यहुदीहरुलाई योगदान दिएर । ताकी सुरक्षाका लागि भनिएका हातहतियार उठाउन् र युद्ध नरोकियोस् ।
इतिहासले भन्छः मुसलमानहरुले कहिल्यै पनि मित्रताका निम्ति हात बढाएनन् । इसाइहरुले पनि बढाएनन्। कसैले आºनो वैभवको हठ गररे निचोर्ने प्रयास गरे भने कसैले आफूसंग भएको श्रोत र साधन बन्द गर्ने धम्की दिएर । यति नीच र तच्ुछतापूर्ण व्यवहार एक आपसमा हनु थाल्यो कि आºनो कठपुतली भैरहँदासम्म राम्रो र आदेश दिए अनुसार नाच्न छाडेमा नाच्ने मञ्च नै भत्काइदिने देखि लिएर तह लगाउने सम्म काम हुदै आए । बिसांै शतााब्दीको अन्तिम दशकको शुरुमा फेरी एकपटक पुरानो दुश्मनीपूर्ण व्यवहार खुलासा हुन थाल्यो । कुवेतमा उत्पादित इन्धन कुवेती जनतालाई समेत उपलब्ध नगराइकन टेक्सास पु¥याउने चाहना विफल भए पछि इराकको तेलले लपेटिएको राज्यमा आगो लगाइयो । उक्त आगो अहिलेसम्म पनि इराक र अफगानिस्तानमा निभेको छैन ।
आतंक भनेको यस्तो चिज हो कि आतंक गराउनेहरु पनि आतंकित भएरै गराउ“छन् । आतकं गर्नेहरु पनि आतंि कत भएर नै गर्ने हनु्। आतकंमा पर्ने व्यक्तिहरु त स्वतहः नै आतंकित हुने भए । युद्ध र आतंकले जित कसैको पनि हुदैन । यद्यपि लडाकुहरुले युद्ध जितेको अफवाह फैलाउन चाहन्छन्। कुनै पनि उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति एक पक्षले अर्काे पक्षलाई आतंकित गराउ“छ । दोस्रो विश्व युद्धअघि यस्तो अवस्था थियो कि जुलुस, नारा, बन्द र हड्ताल गरेर सरकार पक्षलाई आतंकित गराउने र आºनो उद्देश्य अनुसारको कदम चाल्ने । अशान्तिपुर्ण र हातहतियारसहितको युद्ध छाडेर नाराजुलुस गर्ने परम्परा भारत स्वतन्त्रताका निम्ति भएका आन्दोलनहरुमा सफल भएको पाइन्छ । किनभने गान्धीले हातहतियार सहितको क्षतबिक्षतको लडाई नलडरे शान्तिपणर््ू ा लडाई लडन् सिकाए । यो पनि उनको अगे्रजका तर्फबाट भारतीय जनताको नृशंश हत्या भएको देखेर सकभर त्यस्तो नहोस भन्ने चाहना हो भनिए पनि उनको भित्रि आशय चाहि “ अगं्रेज पक्षको पनि ठुलो नोक्सान नहोस्भन्ने बुझ्न असजिलो छैन । जे होस यसको श्रेय उनलाई जान्छ । तर अर्काे पक्षको भनाई के छ भने इटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ भन्ने । तर यसरी जवाफ दिद“ा जसलाई जवाफ दिन खोजिएको हो उ चाही “ उम्कने र निरिह, निर्दोस जनताको हत्या हुने अवस्था हुन्छ । जसरी रामायणको कथामा रावणको शक्ति र सम्पत्तिको अहं र स्त्रीलिप्साका कारण हजारा ंै लंकाबासी जनताले ज्यान गुमाए । राजा वलीको हत्या भयो । न्याय र अन्यायको फैसला गर्ने अधिकार हामीलाई नभए पनि बली राजाको हत्यामा न्याय भएको देखिदैन । त्यसरी नै सद्दाम हुसेनको पद र शक्तिको अहं, ओसामा बिन लादेनको सम्पत्ति र शक्तिको अहं र जर्ज बुशको राज्य शक्तिको अहंले आज विश्वलाई आतंकित बनाएको छ । लडाइका पक्ष बिपक्षले सर्वसाधारण जनतामाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेर रगतको खोलो बगाएका छन् । उनीहरुलाई भविष्यले माफी दिने छैन ।